हराएको बिरालो ११ वर्षपछि भेटिन् यी महिलाले, त्यसपछि के भयो? पढनुस - Everest Dainik - News from Nepal
हराएको बिरालो ११ वर्षपछि भेटिन् यी महिलाले, त्यसपछि के भयो? पढनुस
न्यूयोर्क । मानिस हराएका सूचना त हामीले सुन्दै आएका छौं । तर बिरालो हराएपछि फेरी पाउनु भने साँच्चिकै अनौठो हुन्छ ।
तर न्यूयोर्कमा भने एकजना महिलाले ११ वर्षपछि आफ्नो हराएको बिरालो भेट्टाएकी छिन् ।
हामीकहाँ बिरालो हराएपछि त्यो खोज्ने चलन छँदै छैन भन्दा हुन्छ । त्यसैपनि हराएको बिरालो फेरी चिनिन्छ भन्ने पनि त हुन्न ।
मेगी वेल्ज नाम गरेकी मिहला डचेज काउन्टीमा बस्छिन् । एघार वर्षअघि कुनै अपरिचित व्यक्तिले ढोका खोलेपछि उनको बिरालो बाहिर भाग्यो । त्यसपछि उनले आफ्नो बिरालोलाई यत्र तत्र खोजिन । साथै छिमेकीहरुलाई पनि सोधिन ।
बिरालो हराएपछि उनी अर्को घरमा गइन । पुरानो घरमा आएका मानिसलाई पनि उनले बिरालो फर्कियो भने खबर गर्न भनिन ।
डेली मिररका अनुसार, न त पुरानो घरमा बस्ने मानिस, न त उनका छिमेकीले नै बिरालो पाए । तर उनले यसको रिपोर्ट सरकारी कार्यालयमा गरिन ।
त्यही बेला एकजना घाइते जनावारको उद्दार गर्ने कार्यकर्ताले एउटा बिरालो तीन वर्षदेखि उ नजिक आउन खोजेको नोटिस गरे । बिरालो नजिकै आउन खोज्ने तर समात्न खोज्दा भाग्ने भएपछि ती कनेल नामक ती कार्यकर्ताल एउटा माइक्रोचिप स्क्यानर ल्याए । त्यो चिप बिरालोको शरीरमा राख्न सफल भएपछि बिरालो कहाँ जान्छ भन्ने पत्ता लाग्न सक्यो ।
बिरालो भेटेपछि वेल्जको खुसीको सीमा रहेन । उनले कनेलालाई धन्यवाद दिइन । आजसम्म बिरालो कहाँ थियो भन्ने थाहा नभएपनि अब भने जीवनभर सँगै रहने उनले बताइन । अचम्म त के थियो भने ११ वर्ष वेपत्ता हुँद ासमेत बिरालोको स्वास्थ्य भने राम्रो छ ।
ट्याग्स: Missing Cat